उकुसमुकुस जीवन....... - Kamana News
शनिवार, माघ १० गते २०७७
सिन्धुलीमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु
प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व लडाकूहरुसँगको छलफलमा भने विगतमा जस्तो धोका पाउनु हुने छैन
बन्चरो प्रहारबाट महिलाको मृत्यु
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक आइतबार बस्ने
ठगी आरोपमा दुईजना पक्राउ
# संसद विघटन
आइतवार, पौष २६ २०७७
जीवन सधैँ एक नास हुदैन । सुख र दुख आउने जाने क्रम भईरहन्छ । यी दुवै एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । जुन कुराकोे कमी हाम्रो जीवनमा महशुस हुने गर्छ त्यो कुराले हाम्रो जीवनमा बढी विशेष्ता बोकेको हुन्छ । समयसंगै जीवन र जीवनसंगै समय बदलने गर्दछ । बाच्दै जादाँ तीतामीठा पलहरु आउनुका साथ सहजता असहजता पनि बद्लिदै गएको हुन्छ । जीवन पनि कहिलेकाही उकुसमकुुस महसुस हुन्छ । सधैं एकै किसिमको काम र दैनीकीले यस किसिमको असहजता हुनु सामान्य हो तर यस परिस्थितबाट निक्लन भने सोचे जस्तो सहज नहोला । जब जीवनसंग हार महशुस हुन्छ त्यतीवेला उकुसमुकुस जस्तो लाग्छ जीवन नै । जति अप्ठ्यारो यो शब्द छ त्यती नै गाह्रो महशुस हुने गर्छ ।
उकुसमुकुसले आफ्नो जीवनप्रति असहजता त देखाउँछ नै साथै प्रेरणा पनि कम हुने गर्छ । कहिले काही जीवनको मूल्य नै लाग्दैन र यी सब कुराको नतीजा भने उकुसमुकुसताले झल्काउने गर्छ । सबै कुरा हेर्दा उही पूरानो जस्तो लाग्ने र केही नै नयाँपन नभएको फिल हुने गर्दछ । यो सब कुराले जीवनप्रति केही उत्साह नै आउदैन र अन्तत उकुसमुकुस महसुस हुनु जाएज नै हो । सबै जनालाई कुनै न कुनै समयमा आफ्नो जीवन उकुसमुकुस लागेकै हुन सक्छ । सायदै कोही व्यक्ति होला जसलाई हरेक पल जीवनमा खुसी र हर्षमात्र महशुस गरेको ।
यस्तो परिस्थिमा आफूलाई कसरी परिवर्तन गर्ने त ? असहजताबाट आफूलाई बचाउन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । सानो कुरामा पनि आफूलाई हार मान्न नदिनु एक ओखती हो । सकरातमक सोचले हामीलाई प्रेरणा दिन्छ । कहिले काही यस्तो खाले सोचले डिपे्रसनसमेत हुने गर्दछ । केही समय आफ्नो लागी छुट्याई आफनो जीवनको लक्ष्य र खुसी हुने कारणमा जोड दिने प्रयास गरे अवश्य पनि यस किसिमको महशुसताबाट पनि बच्न सक्छौँ । आफ्नो भावनामहरुलाई नियण्त्रण गर्न सकेमा धेरै नकरात्मक कुराहरुबाट हामी बच्न सक्छौ ।
धेरै सोच्नु पनि राम्रो होईन त्यसैले एक राम्रो सोचौँ र त्यस सोच अनुसार प्रयास गरे पक्कै पनि सफलता तथा खुसी महसुस गर्न सकिन्छ । आफनो खुसी चिन्न पनि अति आवश्यक कुरा हो त्यसैले सानो सानो खुसी चिन्ने प्रयास गरौँ । आत्मविश्वास बढाउँनु पनि अत्यन्त जरुरी हुन्छ । आफ्नो मूल्यवान जीवनलाई हरेक दिन एउटा मौका दिई अगाडी बढौँ ।
आइतवार, पौष २६ २०७७०४:४७:५६
डिप्रेसन किन हुन्छ ?
खेल क्षेत्रमा महिला
तरुललाई चाखलाग्दो रुपमा कसरी खाने ?
बिहानै उठेर आफ्नो नित्यकर्म गरेर कलेज जाने तरखर गर्दै थिए । कलेजबाट फोन आयो र मैले रिसिभमात्र के गरेको थिए उताबाट म्यामले कलेज बिदा छ
अदालतको पनि अग्नी परीक्षा, फैसला अपेक्षित की अनपेक्षित ?